Gịnị Ka Ịgbaghara Mmadụ Pụtara? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Myanmar Norwegian Nyaneka Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Turkmen Tzotzil Ukrainian Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Ịgbaghara mmadụ pụtara ịkwụsị iwesa onye ahụ iwe maka ihe ọjọọ o mere. Na Baịbụl, okwu Grik e sị sụgharịta “mgbaghara” pụtara “ịhapụ ihe,” dị ka ebe mmadụ hapụụrụ onye ọzọ ụgwọ o ji ya. Mgbe Jizọs na-akụziri ndị na-eso ụzọ ya otú e si ekpe ekpere, o ji ụgwọ mmadụ ji tụnyere mmehie. Ọ sịrị: “Gbaghara anyị mmehie anyị, n’ihi na anyị onwe anyị na-agbagharakwa onye ọ bụla nke mehiere anyị.” (Luk 11:4; ihe dị́ n’ala peeji) N’ilu banyere ohu ahụ nke na-anaghị eme ebere, Jizọs jikwa ịgbaghara mmadụ tụnyere ịkagbu ụgwọ mmadụ ji ibe ya.​—Matiu 18:23-​35.
Ọ bụrụ na anyị akwụsị iwere onye mejọrọ anyị iwe, gharakwa ịna-agba ya ụgwọ ka o mezie ihe o mebiri, ọ pụtara na anyị agbagharala ya. Baịbụl kwuru na ọ bụ ezigbo ịhụnanya na-eme ka mmadụ gbaghara ibe ya kpamkpam n’ihi na ịhụnanya ‘adịghị agụkọ ihe ọjọọ.’​—1 Ndị Kọrịnt 13:​4, 5.
Ihe ịgbaghara mmadụ na-apụtaghị:
Ịnabata ihe onye ahụ mere. Baịbụl katọrọ ndị na-ewere na ime ihe ọjọọ dị mma ma ọ bụkwanụ na e nweghị ihe o mere.​—Aịzaya 5:​20.
Ime ka à ga-asị na o nweghị ihe onye ahụ mejọrọ. Chineke gbaghaara Eze Devid mgbe o mere mmehie dị́ oké njọ, ma o meghị ka ọ ghara ịta ahụhụ ihe o mere. Chineke medịrị ka e dee ihe ahụ Devid mejọrọ ka e nwee ike icheta ya ruo taa.​—2 Samuel 12:​9-​13.
Ikwe ka ndị ọzọ na-emegbu gị. Ka e were ya na i binyere mmadụ ego, onye ahụ emefusịa ya, o nweghịzikwa ike ịkwụghachi gị ego ahụ otú ahụ o kwuru. Ihe o mere ewute ya, ya arịọ gị ka i meere ya ebere. I nwere ike kpebie ịgbaghara ya, ghara iburu ya iwe n’obi, gharakwa ịna-echetara ya onye ahụ. I nwedịrị ike ịhapụrụ ya ụgwọ ahụ o ji gị. Ma, i nwekwara ike ikpebi na ị gaghị ebinye ya ego mgbe ọzọ.​—Abụ Ọma 37:21; Ilu 14:15; 22:3; Ndị Galeshia 6:7.
Ịgbaghara mmadụ n’enweghị ezigbo ihe mere ị ga-eji gbaghara ya. Chineke anaghị agbaghara ndị kpachaara anya na-eme ihe ọjọọ, jụ ikweta na ihe ha na-eme adịghị mma, jụ ịgbanwe, jụkwa ịrịọ ndị ha mejọrọ mgbaghara. (Ilu 28:13; Ọrụ Ndịozi 26:20; Ndị Hibru 10:26) Ụdị ndị ahụ na-achọghị ichegharị bụ ndị iro Chineke, ọ chọghịkwa ka anyị gbaghara ndị ahụ yanwa na-agbagharaghị.​—Abụ Ọma 139:21, 22.
Gịnị ka ị ga-eme ma mmadụ mejọọ gị ma jụ ịrịọ gị mgbaghara ma ọ bụ jụ ikweta na ihe o mere dị njọ? Baịbụl kwuru, sị: “Hapụ iwe, hapụkwa ọnụma.” (Abụ Ọma 37:8) Ọ bụ eziokwu na ị naghị ekwu na ihe ahụ o mere gị dị́ gị mma, ma i nwere ike ikpebi na ị gaghị eburu onye ahụ iwe n’obi. Tụkwasị Chineke obi na ọ ga-ekpe onye ahụ ikpe. (Ndị Hibru 10:30, 31) Ihe ọzọ ga-akasikwa gị obi bụ ịmata na oge na-abịa mgbe Chineke ga-eme ka a ghara inwe ihe ga na-ewetu anyị.​—Aịzaya 65:17; Mkpughe 21:4.
“Ịgbaghara” ihe ọ bụla i chere na e mejọrọ gị. Mgbe ụfọdụ, kama ịgbagharawa onye mejọrọ anyị, anyị kwesịrị ikweta na e nweghị ezigbo ihe mere anyị ga-eji lewe ihe onye ahụ mere anya ka mmejọ. Baịbụl kwuru, sị: “Adịla ngwa ná mmụọ gị ịbụ onye a kpasuru iwe, n’ihi na iwe iwe bụ ihe na-adịgide n’obi ndị nzuzu.”​—Ekliziastis 7:9.
Otú ị ga-esi agbaghara mmadụ
Cheta ihe ịgbaghara mmadụ pụtara. Ọ pụtaghị na ị na-anabata ihe ọjọọ onye ahụ mere gị ma ọ bụ na-eme ka à ga-asị na e nweghị ihe o mere gị. Kama, ọ pụtara ịhapụ ihe ahụ o mere gị.
Ghọta na ịgbaghara mmadụ bara uru. Ọ bụrụ na ị naghị ewesa mmadụ iwe ma ọ bụ na-eburu mmadụ iwe n’obi, ọ ga-eme ka obi na-eru gị ala, ahụ́ ana-adị gị mma, obi ana-adịkwa gị ụtọ. (Ilu 14:30; Matiu 5:9) Ihe ọzọ kacha mkpa bụ na ịgbaghara ndị ọzọ na-eme ka Chineke gbaghara anyị mmehie nke anyị.​—Matiu 6:​14, 15.
Na-emetere ndị ọzọ ebere. Anyị niile ezughị okè. (Jems 3:2) Ebe ọ bụ na obi na-adị anyị mma ma ndị ọzọ gbaghara anyị, anyị kwesịrị ịna-agbaghara ndị ọzọ.​—Matiu 7:​12.
Na-echebara ndị ọzọ echiche. Ọ bụrụ na ihe mmadụ mere anyị bụ obere ihe, anyị nwere ike ime ihe Baịbụl kwuru. Ọ sịrị: ‘Na-edirinụ ibe unu ihe.’​—Ndị Kọlọsi 3:​13.
Mee ihe ngwa ngwa. Gbalịa ka ị gbaghara onye mejọrọ gị ngwa ngwa kama ịnọ na-ewe iwe.​—Ndị Efesọs 4:​26, 27.
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Udo na Obi ụtọ Ihe Mmadụ Kweere na Otú E Si Efe Chineke Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Mgbe Jizọs gwara nwaanyị ahụ yiri ka ọ̀ bụ onye akwụna na a gbagharala ya mmehie ya, ọ̀ na-egosi na ọ dị mma mmadụ imebi iwu Chineke?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka Ịgbaghara Mmadụ Pụtara?
ijwbq isiokwu 95